Ixabiso elikhuphisanayo laseChina i-ND yag laser tattoo inks ukususwa komatshini ekwenziweni nakwifektri | GGLT
Ixabiso elikhuphisanayo ND yag laser tattoo inks umatshini wokususa
Laser izixhobo umvambo isebenzisa imo switch Q, leyo eyenza ukusetyenziswa laser ngoko nangoko kukhutshwa ukwaphula ibala kwisakhiwo kakubi .. Nantso laser ngoko nangoko ezikhutshiweyo ithiyori: embindini amandla aphezulu ukukhupha ngesiquphe, nto leyo eyenza laser of wave band band ngephanyazo ukungena cuticle. kwisakhiwo esingaginyisi ntweni kwii-6ns, kwaye wophule ii-pigment ezifanelekileyo ngokukhawuleza. Emva kokufunxa ubushushu, ii-pigment ziyadumba zize ziqhekeze, ezinye ii-pigment (ezikwi-cuticle enzulu yolusu) zibhabha zisuke emzimbeni ngoko nangoko, kwaye ezinye ii-pigment (ulwakhiwo olunzulu) ziyaqhekeka emva koko zibe yi-granule encinci enokukhothwa yiseli, icoleke kunye nokutya okuvela kwi-lymph ukuthengisa. Emva koko i-pigment kwisakhiwo esibi iyakhanya ukuba ilahleke. Ngapha koko, i-laser ayonakalisi ulusu oluqhelekileyo.
Izibambo ezi-1 ezintathu, i-1064nm, i-532nm kunye ne-1320nm yokubamba unodoli omnyama. Iinjongo kuzo zonke iintlobo zeetattoos, freckle, nevus, birthmark, pigmentation kwaye zinokuhlaziya isikhumba sekhabhoni.
2.500W amandla eyomeleleyo, isiphumo unyango ogqibeleleyo.
Inkxaso yolwimi oluninzi kunye nescreen sokuchukumisa imibala.
I-4 yezoNyango, i-ISO ... izatifikethi ezininzi zivunyiwe.
1.Phucula ukusebenza kwaye wenze ezona zisombululo zingatshisiyo kwisiqwenga sesandla konke konke.
Ubomi obude beXesha leXenon.
Ukuzinza okungaphezulu kwesiqwenga sesandla ngaphakathi kuphuculwe.
Uyilo 4.Portable kunye nokusebenza lula ungenza unyango ukhenketho; Ixabiso eliphantsi kunye nokusetyenziswa ngokubanzi kunokubuyisela ngokukhawuleza kutyalo-mali.
Q1: njani umgangatho weemveliso zakho?
A1: Siza kujonga zonke iimpahla nganye nganye ngaphambi kokuba zisiwe
Q2: Kuthekani ngexesha lokuhambisa?
I-A2: Ixesha lokuhambisa ngaphakathi kwee-3days ezinesitokhwe.
I-Q3: Ngaba ungayamkela inkonzo ye-OEM / ODM?
I-A3: Sineqela loyilo lobuchule kwaye samkela ii-odolo ze-OEM / ODM
I-Q4: Ngaba unganikezela ngexabiso lokhuphiswano?
I-A4: Inkampani yethu igxile ekuveliseni nasekuthengiseni iimveliso ezikumgangatho ophezulu zonyango lwezixhobo ezinamaxabiso efektri. Sinethemba lokuphuhlisa imeko yokuphumelela kunye nabathengi bethu.
I-Q5: Kuthekani ngentlawulo?
I-A5: Imiqathango yeNtlawulo: I-Western Union, i-PayPal, iTshintshelo lweBhanki.
Egqithileyo Commercial 3 wavelength yag laser tattoo ukususwa kwezixhobo
Okulandelayo: Idesktop Q laser etshintshiweyo isuse umatshini wokwenza i-tattoo
Nd Umatshini weLaser weLag
Nd Yag Laser Umatshini wokususa iTattoo
Q Guqula ukususwa kweTattoo yeLaser
Ukususa umatshini weTatoo
Ukususwa kweTattoo Laser
Ukususwa kweTattoo Laser Machine
Umatshini wokuSusa iTattoo
Ukususwa kweYag Laser Tattoo
Q utshintshe u-yag umatshini wokususa umvambo we-laser
Commercial 3 wavelength yag laser umvambo ukususwa ...
Umgangatho ophezulu nd yag Q utshintshe ilusu yesikhumba se-laser ...
I-Q yokuthengisa itshintshe i-laser carbon peeling mac ...
Umatshini wokuhlaziya ulusu we-Yag
Idesktop Q laser etshintshiweyo isuse umatshini wokwenza i-tattoo